www.xamarcade.com » Rag Hubeysan oo Weerar ku qaaday xarun Ciidamada Dowladda ay ku leeyihiin Dharkenley
Rag Hubeysan oo Weerar ku qaaday xarun Ciidamada Dowladda ay ku leeyihiin Dharkenley
Kooxo hubysan ayaa saakay weerar Bambaanooyin ah ku qaaday fariisin ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmada Dharkenley ee Gobolka Banaadir.
Goobjooge la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xarun ciidamada dowladda, gaar ahaan ciidamo ay dhawaan tababartay dowladda Imaaraadka lagu weeraray xarun ay ku leeyihiin Xaafadda Kaawa Godey Degmada Dharkenley ee Magaalada Muqdisho.
Waxaana uu tilmaamay in weerarkaasi ay ku dhaawacantahy Haweeney da’ah oo ka mid ahayd dadka deegaanka.
Sidoo kale Goobjoogahan ayaa intaasi raaciyay in weerarka kadib ciidamada dowladda ay howlgallo ka sameeyeen nawaaxiga Kaawa Godey, islamarkaana ay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah Raggii ka dambeeyay weerarkaasi.
Muddooyinkii dambe ayaa Magaalada Muqdisho waxaa ka dhacayay falal liddi ku ah ammaanka, sida weeraro qaraxyo ah, xilli dowladda Soomaaliya ay ku dhaawaqday dagaal ka dhan ah Al Shabaab oo weli ku xoogan Koonfurta iyo Baratmaha Soomaaliya.